विश्वकप क्रिकेट छनोट अभ्यास खेलमा भारतसँग नेपालको दोस्रो हार
काठमाडौँ, २ असार । ट्वेन्टी ट्वेन्टी विश्वकप छनोट प्रतियोगिताका लागि भारत भ्रमणमा रहेकोे नेपाली टोली अभ्यास खेलमा भारतको हिमाञ्चल प्रदेशसँग पराजित भएको छ । भारतको धर्मशाला क्रिकेट मैदानमा आज भएको अभ्यास खेलअन्तर्गत अन्तिम खेलमा...
नेपाललाई टक्कर दिने भारतलाई गुआमले नराम्रोसँग हरायो
काठमाडौं, २ असार । नेपाललाई अधिकांश समय टक्कर दिँदै आएको भारतीय फुटबल टिमलाई गुआमले नराम्रो हारको स्वाद चखाएको छ । फिफाको विश्व वरियतामा १ सय ७४ औं स्थानमा रहेको गुआमले भारतलाई विश्व छनौट अन्तर्गत...
कोपा अमेरिकामा मेस्सीको अर्जेन्टिना विजयी
काठमाडौं, २ असार । प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता कोपा अमेरिकामा अर्जेन्टिनाले पहिलो विजयी हात पारेको छ । बुधबार विहान भएको खेलमा सर्जियो एगुएरोको एक मात्र गोलको मद्दतमा अर्जेन्टिनाले उरुग्वेलाई पराजित गरेको हो । सर्जियो एगुएरो...
काठमाडौं, १ असार । विश्व फुटबलका स्टार को हुन ? यो प्रश्नको उत्तर सजिलै आउँछ क्रिष्टियानो रोनाल्डो । उनलाई चिन्दैन भन्नु व्यर्थ हुन्छ । बच्चा देखि वृद्धसम्म उनका फ्यान छन् । फुटबल र पैसामा...
भारतमा जारी अभ्यास खेलमा नेपालको दोस्रो जित
काठमाडौं, ३२ जेठ । टी-२० विश्वकप छनोटको भारतमा तयारी गरिरहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले अभ्यास खेलमा दोस्रो जित हात पारेको छ । सोमबारको दिउँसो भारतको धर्मशाला रंगशालामा भएको दोस्रो अभ्यास खेलमा हिमाञ्चल प्रदेशलाई ६१...
नेपाली खेलकुद इतिहासमा पहिलो पटक राखेपमा महिला सदस्य–सचिव नियुक्त
काठमाडौँ, ३२ जेठ । नेपाली खेलकुदको इतिहासमा नै पहिलोपटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को महिला सदस्य–सचिवका रुपमा सकुन्तला नगरकोटी नियुक्त हुनुभएको छ । विसं २०३१ मा कञ्चनपुरको पुनर्वासमा जन्मनुभएकी नगरकोटी निमित्त सदस्य–सचिवका रुपमा राखेप...
नेयमारको गोलमा कोपा अमेरिका फुटबलमा ब्राजिल विजयी
काठमाडौं, ३२ जेठ । कोपा अमेरिका फुटबलमा स्टार स्ट्राइकर नेयमारको टिम ब्राजिलले विजयी सुरुवात गरेको छ । सोमबार विहान भएको आफ्नो खेलमा ब्राजिलले पेरुलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको हो...
विश्वकप क्रिकेट छनोटमा नेपालले भारतलाई हरायो
काठमाडौं, ३२ जेठ । टी-ट्वेन्टी विश्वकप छनोटको तयारीका लागि भारतमा रहेको नेपाली क्रिकेट टोलीले आइतबार भएको अभ्यास खेलमा हिमाञ्चल प्रदेशलाई पाँच विकेटले हरायो । हिमाञ्चल प्रदेशस्थित धर्मशाला क्रिकेट मैदानमा भएको उक्त खेलमा हिमाञ्चल प्रदेशले पहिला...
रोनाल्डोले ह्याट्रिक हान्दा मेस्सीलाई ठूलो झट्का
काठमाडौं, ३१ जेठ । युरो कपमा फुटबल स्टार रोनाल्डोले ह्याट्रिक हानेर पोर्चुगललाई जित दिलाए । तर यता कोपा अमेरिका कप फुटबल खेलिरहेका अर्का स्टार लियोनल मेस्सीलाई भने खेल बराबरीमा रोकिएपछि ठूलो झट्का लागेको छ...
युरो कपमा रोनाल्डोको ह्याट्रिक, पोर्चुगल विजयी
काठमाडौं, ३१ जेठ । युरोपमा जारी युरो कप छनोट फुटबल प्रतियोगितामा फुटबल स्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डोले गोलको वर्षा गरी ह्याट्रिक गरेका छन् । रोनाल्डोको ह्याट्रिकमा पोर्चुगलले अर्मेनियालाई पराजित गरेको छ । शनिबार राति भएको खेलमा...
नयाँ घरमा सरेको दिन करेन्ट लागेर एन्फाका कार्यबाहक अध्यक्षको निधन
काठमाडौं, ३० जेठ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का कार्यवाहक अध्यक्ष ललितकुष्ण श्रेष्ठको करेन्ट लागेर निधन भएको छ । शुक्रबार राति राजधानीस्थित आफ्नै नयाँ घरमा करेन्ट लागेर श्रेष्ठको निधन भएको आफन्तले जनाएका छन् । शुक्रबारमात्रै...
युवायुवतीलाई खेलकुदप्रति आकर्षित गराउन धरानमा अनौठो योजना
– सन्तोष काफ्ले धरान २९ जेठ । युवायुवतीलाई खेलकुदप्रति आकर्षित गर्दैै दुव्र्यसनीमुक्त सहर बनाउने अभियान अन्तर्गत धरानमा नयाँ योजना सुरु भएको छ । दुव्र्यसनीमुक्त सहर बनाउन अभियान नै चालेर विगतदेखि विविध कार्यक्रम गर्दै आएको...
« 1 … 315 316 317 318 319 … 365 »
यस्तो छ अभिनेत्री साम्राज्ञीको ‘दुर्व्यवहार’ बयानबारे आमा नेहाको भनाई
नेकपा स्थायी कमिटीबारे ईश्वर पोखरेलले दिए कडा अभिव्यक्ति
प्रचण्ड भन्छन्– मैले सहमति खोजें, ओलीजीले एकाधिकार खोज्नुभयो
स्थायी समिति चलिरहेकै बीचमा प्रधानमन्त्रीले अचानक डाके मन्त्रिपरिषद बैठक
घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदम के ? मेलमिलाप कसरी ?
खुमलटारमा बिहानै पुगे ओली निकटका नेता